Uqhagamshelwano kwiiWebhu zeeWebhsayithi ezingabikho
I-Site ingafaka iziqhagamshelana nakwezinye iiwebhusayithi okanye ezinye iindawo ezingasetyenziswa yi-NYECOUNTDOWN, LLC okanye amaqabane abo, kunye nabanye abaqhutywe ngabanye abantu. Ezi nxu lumane nje zikulungele kuwe. Asizange sihlaziye ulwazi kwizinye iisayithi. Asixanduva lomxholo weyiphi na isayithi okanye nayiphi na imikhiqizo okanye iinkonzo ezinokunikezwa ngamanye amasayithi. Ngaloo ndlela, kufuneka uqaphele xa usebenzisa ezinye iiwebhusayithi, njengoko wenza njalo kumngcipheko wakho. I-NYECOUNTDOWN, LLC ikukhuthaza ukuba ubuyekeze umgaqo-nkqubo wecalaphi nawuphi na isayithi phambi kokuhambisa ulwazi lomntu.
I-NYECOUNTDOWN, LLC isebenzisa i-PayPal, Inc. njengomboneleli weenkonzo zekhredithi yomntu wesithathu. I-NYECOUNTDOWN, LLC ayigcinanga naliphi na ixesha, nayiphi na ingcaciso yemboleko yokuthenga okanye yokugcina ubhaliso kwiNkonzo yayo. Ngaloo ndlela, i-NYECOUNTDOWN, LLC iyakhubaza yonke imbopheleleko yengcaciso yekhredithi.
I-NYECOUNTDOWN, LLC isebenzisa i-Google Analytics ukufumana ulwazi olungabonakaliyo ukusuka kwisiseko sayo somsebenzisi kwaye ikwazi ukuqokelela iinkcukacha malunga nokuziphatha kwezivakashi kwiiwebhusayithi zayo. I-NYECOUNTDOWN, LLC ingabonisa olu lwazi ngokubanzi okanye lunikeze kwabanye. Nangona kunjalo, i-NYECOUNTDOWN, i-LLC ayibonakali ulwazi oluthile-ngaphandle kokuchazwe ngezantsi.
I-NYECOUNTDOWN, LLC icacisa ukuchonga kunye nokwazi ukwazisa ngabanye abasebenzi babo, iikontraka kunye nemibutho esebenzisanayo:
Ikhukhi kwaye Musa ukulandelela izicelo
Ukuba i-NYECOUNTDOWN, LLC, okanye yonke impahla yayo, ifunyenwe, okanye kwimeko engalindelekanga ukuba iNYECOUNTDOWN, LLC iphuma kwishishini okanye ingena kwi-bankruptcy, ulwazi lomsebenzisi luya kuba lunye lwefa elidluliselwayo okanye elifunyanwa ngumntu wesithathu. Uyavuma ukuba olo tshintshelo luya kwenzeka, kwaye nayiphi na umntu ofumana i-NYECOUNTDOWN, LLC angaqhubeka nokusebenzisa ulwazi lwakho lomntu njengoko kuchazwe kulo mgaqo-nkqubo.
Izikhangiso ezibonakala kwiziko lewebhu ziyakwazi ukuhanjiswa kubasebenzisi ngabalingani bezentengiso, abanokubeka ii-cookies. Ezi khukhi zivumela umncedisi we-ad ukuba aqaphele ikhompyutha yakho rhoqo xa ekuthumela i-adversi ye-intanethi ukuqokelela ulwazi malunga nawe okanye abanye abasebenzisa ikhomputha yakho. Le ngcaciso ivumela amanxibelelwano e-ad, phakathi kwezinye izinto, ukuhambisa iintengiso ezijoliswe kuzo ezikholelwa ukuba ziya kuba nomdla kuwe. Lo Mgaqo-nkqubo weMfihlo ubandakanya ukusebenzisa ikhukhi nge-NYECOUNTDOWN, LLC kwaye ayigqugquzeli ukusebenzisa ikhukhi ngabakhangisi.
Ukunyanzeliswa kunye nokuncipha kweMfanelo
UMthetho oLawulayo kunye neNdawo engabonakaliyo